Ajụjụ - Guangzhou Danye Optical CO., LTD
Gịnị bụ gị ahịa na nke kacha nta iji quantities (MOQ)?
Anyị na-enye ụlọ ọrụ mmepụta ihe ọnụahịa dịka ọnụọgụ dị iche iche, MOQ anyị bụ 1 unit;
You bụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe?
Ee anyị bụ ndị ọkachamara na-emepụta na ekspootu jikọtara ya na nyocha, mmepe, mmepụta, ahịa na ọrụ; anyị nwere ọgaranya ahụmahụ na ihe ọmụma ìgwè nke mma ụlọ ọrụ n'ihi na ihe karịrị afọ 11; factory na-audited pụrụ ịdabere soplaya site na ụwa nile ama TUV na SGS;
Gịnị bụ gị isi ngwaọrụ?
Companylọ ọrụ anyị na-elekwasị anya n'ịdị mma nke akụrụngwa mara mma, ngwaọrụ anyị bụ isi gụnyere 808nm diode laser, CO2 fractional laser, Q switch yag laser, cryo skin device, 360 cryolipolysis, Thermagic RF, OPT, multifunctional device etc;
Gịnị bụ gị ngwaahịa akwụkwọ ikike?
Nọmalị anyị na-enye 1-2 afọ akwụkwọ ikike dị ka dị iche iche iche iche nke igwe; n'oge akwụkwọ ikike, akụkụ ahụ mapụtara bụ n'efu zitere ma dochie ya;
N'ihi na kacha nta iji ejikari anyị ụzọ oge bụ 3-7 ụbọchị, n'ihi na nnukwu quantities iji na-adabere ugbu a mmepụta ọnọdụ na ahịa kpọmkwem chọrọ;
Nọmalị anyị na-anabata nnyefe ụlọ akụ (T / T), ịkwụ ụgwọ ntanetị, njikọ ọdịda anyanwụ, maka usoro ịkwụ ụgwọ ndị ọzọ nwere ike ịkọwa n'ihu;
Nkwụnye ego 50%, nguzo 50% tupu nnyefe;
Kedu ụzọ mbufe na ego mbupu?
Nọmalị ọtụtụ ụgbọ mmiri ụzọ maka akwụkwọ: ndị ahịa na-ahọrọ ngwa ngwa ngwa ngwa site n'ụlọ ruo n'ụlọ, ma ọ bụ ibu ọkụ ikuku na-asọ mpi site n'ọnụ ụzọ ruo ọdụ ụgbọ elu, ma ọ bụ ibu ụgbọ mmiri dị ọnụ ala site n'ọnụ ụzọ ruo n'ọdụ ụgbọ mmiri; na mbupu ego dị iche iche dị ka n'elu mbufe ụzọ, maka nkọwa biko jụọ anyị;
OEM na ODM ọrụ dị?
Ee, ụdị azụmahịa abụọ dị, kedu ihe ọzọ, dị ka onye nrụpụta anyị ka nwere ike ị nye ihe ngwọta zuru oke gụnyere ngwanrọ ngwanrọ, imepụta ngwaike, imepụta ahụ, nhazi usoro maka ahaziri ahaziri; nabata ịjụ ajụjụ;
sonyere anyị, mepụta ọdịnihu mara mma nke na-enwu gbaa;